ကြည့်ရှု့သူများ နေတဲ့ ကိုရီးယားလို ပြန်ဆို ပေးထားတဲ့ “ကမ္ဘာမကြေဘူး” သီချင်း (ရုပ်သံ) – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကြည့်ရှု့သူများ နေတဲ့ ကိုရီးယားလို ပြန်ဆို ပေးထားတဲ့ “ကမ္ဘာမကြေဘူး” သီချင်း (ရုပ်သံ)
ကြည့်ရှု့သူများ နေတဲ့ ကိုရီးယားလို ပြန်ဆို ပေးထားတဲ့ “ကမ္ဘာမကြေဘူး” သီချင်း (ရုပ်သံ)
ကမ္ဘာမကြေဘူး သီချင်းကတော့ တေးရေးဆရာ နိုင်မြန်မာ က အမေရိကန် ရော့ဂီတဝိုင်း “ကန်ဇာ့စ်” အဖွဲ့ရဲ့ နာမည်ကျော် Dust in the Wind သီချင်းသံစဉ်ကို မြန်မာစာသားသွင်းရေးသားခဲ့ပြီးရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှ စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်များတွင် အရေးပါ ထင်ရှားလာခဲ့သည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၁ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာသိမ်းခံရခြင်းဖြစ်စဉ်တွင် အာဏာရှင် ကိုဆန့်ကျင်ရာ၌ တကျော့ပြန်ခေတ်စားလာခဲ့သော သီချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုခါမှာတော့ ကမ္ဘာမကြေဘူး ဆိုတဲ့ သီချင်းကို Korea က 안녕, 우린 라온이라고 해 ဆိုတဲ့youtube channelက ပြန်ဆိုပေးထားတာပါ။ ကြက်သီးတွေ ထလာ ပြီး မျက်ရည်တွေ ပါကျရပါတယ်😭အဲ့ထဲက ဆံပင်ရှည်ရှည် နဲ့ Kwon Ji Hoဆိုတဲ့တစ်ယောက် ကလည်း Save Myanmar.I really really don’t want any more sacrifices…cheer up,all of you will be able to achieve democracy!!ဆိုပြီး မန့်ထားပေးပါသေးတယ်။
0:18 စက္ကန့်မှာ ပါသည့် ဓာတ်ပုံ သည် စစ်အာဏာသိမ်းမှု ကို ထောက်ခံသည့် အဖွဲ့၏ ပုံဖြစ်ပါသည်။ကျွနုပ်တို့ တကယ့်စိတ်ရင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများကို အားပေးထောက်ခံရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို တိတိကျကျ ဖော်ပြလိုသည့်သဘောဖြင့် အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပထမ ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် အနည်းငယ် အဆင်မပြေမှု ရှိခဲ့ပါလျင် နားလည်ပေးပါရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွနုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို အားပေးထောက်ခံပါသည် လို့လည်းပရိသတ်တွေ အထင်မမှားအောင်ရှင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကမာၻမေၾကဘူး သီခ်င္းကေတာ့ ေတးေရးဆရာ ႏိုင္ျမန္မာ က အေမရိကန္ ေရာ့ဂီတဝိုင္း “ကန္ဇာ့စ္” အဖြဲ႕ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ Dust in the Wind သီခ်င္းသံစဥ္ကို ျမန္မာစာသားသြင္းေရးသားခဲ့ၿပီးရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံမွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဒီမိုကေရစီတက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အေရးပါ ထင္ရွားလာခဲ့သည့္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၂၁ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာသိမ္းခံရျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အာဏာရွင္ ကိုဆန္႔က်င္ရာ၌ တေက်ာ့ျပန္ေခတ္စားလာခဲ့ေသာ သီခ်င္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အခုခါမွာေတာ့ ကမာၻမေၾကဘူး ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို Korea က 안녕, 우린 라온이라고 해 ဆိုတဲ့youtube channelက ျပန္ဆိုေပးထားတာပါ။ ၾကက္သီးေတြ ထလာ ၿပီး မ်က္ရည္ေတြ ပါက်ရပါတယ္😭အဲ့ထဲက ဆံပင္ရွည္ရွည္ နဲ႔ Kwon Ji Hoဆိုတဲ့တစ္ေယာက္ ကလည္း Save Myanmar.I really really don’t want any more sacrifices…cheer up,all of you will be able to achieve democracy!!ဆိုၿပီး မန္႔ထားေပးပါေသးတယ္။
0:18 စကၠန္႔မွာ ပါသည့္ ဓာတ္ပုံ သည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ကို ေထာက္ခံသည့္ အဖြဲ႕၏ ပုံျဖစ္ပါသည္။ကြၽႏုပ္တို႔ တကယ့္စိတ္ရင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပလိုသည့္သေဘာျဖင့္ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ အနည္းငယ္ အဆင္မေျပမႈ ရွိခဲ့ပါလ်င္ နားလည္ေပးပါရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကြၽႏုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို အားေပးေထာက္ခံပါသည္ လို႔လည္းပရိသတ္ေတြ အထင္မမွားေအာင္ရွင္ျပေပးထားပါတယ္။
Previous post တစ်ချို့ မိတ်ဆွေ တွေ ကို ရင်နာနာ နဲ့ စွန့်လွတ်ခဲ့ ရ ကြောင်း ပြော လာတဲ့ မင်းမော်ကွန်း
Next post အခက် အခဲ အတားအဆီးတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း တောင်ဥက္ကလာ လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါ၀င် အားဖြည့်နေကြတဲ့ ဘုန်းဆက်သွင်၊ ပိုပို ၊ မိစန္ဒီ နဲ့ လိမ္မော်သီး